Ngoku ungayigcina i-Oukitel WP2 nge-euro ezingama-190 kuphela | I-Androidsis
Ngoku ungagcina i-Oukitel WP2 nge-euro ezingama-190 kuphela
Kwiinyanga ezidlulileyo, sithethile, kwaye kakhulu, malunga uziso oluzayo lwenkampani yaseAsia iOukitel, ifemi ebonakaliswa ngokunikezela ngee-smartphones ezinganyangekiyo kwimarike kwaye nazo zinobungakanani bebhetri enkulu. Imodeli yakutshanje evela kule nkampani sele iza kufika kwintengiso yi-Oukitel WP2.
Njengoko besitshilo kumanqaku angaphambili, i-Oukitel WP2 yi-smartphone enebhetri enkulu ye-10.000mAh, isiqinisekiso se-IP68, isikrini esine-intshi ezi-6 esine-FullHD + isisombululo ... Esi siginali ngoku sinokugcinwa ngeGearbest. Ukuba siyakwenza kule veki, singagcina ama-50, Kwixabiso layo lokugqibela, eyi- $ 269.
1 Iimpawu ze-Oukitel WP2
2 Thatha ithuba lokunikezelwa kwexesha elilinganiselweyo
Iimpawu ze-Oukitel WP2
Ukuba ucwangcisa ukuvuselela i-smartphone yakho endala kwaye ujonge imodeli leyo ukumelana namathontsi, amaqhuma, uthuli, ukuntywiliselwa kunye nokunyeKuya kufuneka uyithathele ingqalelo i-Oukitel WP2, isiphelo sendlela esingagqamanga nje kuphela kuloo ndlela, kuba ikwasinika inani elikhulu lenkcazo yeetheminali eziphezulu esizichazayo apha ngezantsi:
10.000 mAh ibhetri ukuhlawulisa ngokukhawuleza kuyahambelana. Ngokomenzi, esenza ukusetyenziswa kwesiqhelo kwesiphelo, i-Oukitel WP2 inokuba ziintsuku ezisi-7 ngaphandle kwesidingo sokusondela kwisokethi.
La Isiqinisekiso se-IP68, Isinika ukumelana nalo naluphi na uhlobo lolwelo ukongeza kwisanti, nokuba intle kangakanani. Umzimba uyamelana nokubethwa ukusuka kwiindawo eziphakamileyo, ukuwa kwizinyuko, ukubetha ngengozi ...
Iscreen esine-intshi ezi-6 esine-18: 9 factor ratio. Isikrini se-Oukitel WP2 sikhuselekile ngeGlasi yeGorilla, esisinika ukhuseleko olongezelelekileyo nakuphi na ukuwa okungafunekiyo okanye ukubetha. Isisombululo sesikrini yi-HD epheleleyo, + isisombululo sokuba zimbalwa kakhulu iiterminal ezinokuziqhayisa kwimarike.
Ikhamera yangemva i-16 mpx kunye ne-2 mpx ngokwahlukeneyo yenziwe nguSamsung, ngelixa ukukhokela kuyi-8mpx.
Iprosesa ye-8-core MediaTek MT6750T, ihamba kunye Imemori ye-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi.
Ukuvula ubuso kunye nenzwa yeminwe. I-Oukitel idibanisa ezona ndlela zimbini zisetyenziswayo kwezokhuseleko emhlabeni weefowuni, ezilungele ukuba asinakho ukusebenzisa enye yazo, ezinje ngenzwa yeminwe.
I-chip ye-NFC. Uninzi lweetheminali ezijikeleze i-euro ezingama-200, ezifikelela kwimarike eyona ngxaki yazo iphambili kukuba aziboneleli nge-chip ye-NFC ukuze ikwazi ukwenza iintlawulo ngeefowuni eziphathwayo. I-Oukitel WP2 inayo, ke siya kuba nakho ukushiya ikhaya ngaphandle kwesipaji sethu ukuya kuthenga imihla ngemihla.
Thatha ithuba lokunikezelwa kwexesha elilinganiselweyo
Phakathi kukaSeptemba 24 ukuya ku-30, unokuyibhukisha I-Oukitel WP2 yi- $ 219 kuphela (malunga nee-euro ezingama-190 zokutshintsha), xa ixabiso laso eliqhelekileyo lingama-269 eedola. Ukuba ufuna ukusebenzisa eli thuba, kuya kufuneka uhambe ngeli khonkco kwiphepha leGearbest apho ikhoyo le ntengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ngoku ungagcina i-Oukitel WP2 nge-euro ezingama-190 kuphela
UXiaomi sele eqala ukubhengeza ukwaziswa kwamazwe aphesheya kweXiaomi Mi 8 Lite